Kuzadziswa kweIDS: Inochinjika Warehouse uye Kuzadzikiswa Services » Martech Zone
Makore mashoma apfuura, ini ndaifanira kutora rwendo rwe IDS nzvimbo kuno kuMidwest. Chaive chakandivhurira ziso nekuti ini ndaive ndisati ndamboona kufambira mberi kwakaitika mune zvekushandisa, imba yekuchengetera uye maindasitiri ekuzadzikisa. Nekukurumidza kumberi kune rino gore uye ini ndakave nekukurukurirana kunoshamisa nevepamusoro chikoro bhizimusi kwandaive ndichigovana navo nezve ecommerce indasitiri.
Vanhu havazive kuti kune chaiwo mabhizinesi ari kushanda izvozvi apo bhizinesi risingatombobata chigadzirwa. Kune makambani akaita seIDS, ayo anotungamira ese maficha ekutora zvigadzirwa kumutengi wako (uye kudzoka kana paine zvinodzoka). Iwo anotumirwa anooneka akananga kubva kumugadziri - asi akaunganidzwa mudunhu neIDS.
Kodhi pane saiti yemutengesi inoenda yakananga kunzvimbo yekuzadzikisa uko yakanyatsoiswa mumapake uye kutumirwa kunze kumutengi. Uku kufambira mberi kunoshamisa muhunyanzvi hwevatengesi varikutora zvirinani.
Vatengesi vakuru vanogona kutora mukana weIDS kusimudzira kukura kana mwaka mamipisi ari kudiwa. Vatengesi vadiki vanogona kushandisa IDS kubva kumberi kuenda kumberi kune yavo yese yekuchengetera, kugovera, uye kudzoka. Kuburikidza nechikamu chega chega, IDS inoratidzira kubatanidzwa kwekambani.
Nekuda kweinogadziridza nzira uye nekuchinjika kwevashandi vayo uye masisitimu, IDS yaive mubairo musarudzo makore mashoma kumashure muIndipolis. Nzvimbo yepakati yeIndiapolis muMidwest, inofungidzirwa mamiriro ekunze, uye mutengo wakaderera wekurarama zvinoita kuti ive nzvimbo yakanaka yekuzadzisa nzvimbo senge iyi.
Sevashambadzi, zvakakosha kuti tizive kuti bhizinesi rakashanduka. Icho chokwadi chekuti iwe unokwanisa kugadzira imwe digit digitally, kuti iigadzirwe mhiri kwemakungwa, imba yekuchengetera, uye ugozvigovera pasina kambani yako yakambobata yakanaka uye inovhura toni yemikova yehunyanzvi hwekugadzira.
Tags: idskuzadzisa idsindianaindianapolislogisticsreverse logistics
Chii chiri, Nei Uchishandisa, uye Maitiro Ekugadzira Mutengi Munhu